I-WOWOW Pot Filler Folding Faucet Brass Wall Mount Matte Ikhishi Elimnyama Lompompi
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Embizeni Filler Ikhishi ompompi / WOWOW Pot Pot Filler Faucet Brass Wall Mount Matte Black Ikhishi ompompi
Isihlungi se-Brass Pot: Ibhodwe lokugcwalisa ithusi ngobuningi bokwakhiwa okwenziwe ngethusi elimsulwa, ukuvimbela ukugqwala nokugqwala; ubuso obungaphakathi obucwebezelisiwe, konke ukudonsa okudlula kokugcwaliswa kwembiza kungokwemvelo futhi kunempilo, akunakho okokusebenza okuyingozi
I-360 ° Rotopable Wall Faucet: Isiphatho esimbili samatte embiza emnyama yokugcwalisa ithusi ngamaphayiphu amabili ethusi anikela ngesenzo esibushelelezi sokujika nokuvikela ukuconsa; umklamo ogoqekayo ulungele ukugcwalisa amabhodwe esitofu sakho futhi konga isikhala sakho sasekhishini
Brass Amaphayiphu & Neoperl Aerator: Igobolondo lethusi elingena drip, ukuqina nokuvikela ukuconsa. I-aerator ephezulu ye-Neoperl ABS inikeza ingcindezi engaguquguquki yamanzi nokugeleza okuqondile okungaguquguquki kwamanzi, kwakha ukusakazwa okuphelele kwe-aerated, ukuthula nokungahlakazeki. Okubaluleke kakhulu, konga amanzi
I-Wall Mount Pot Filler Faucet: Intambo yokuxhuma yethusi elihlanzekile le-Universal 1/2 NPT, ukufakwa kodonga olulodwa lomgodi, akukho sidingo samathuluzi anzima, vele usebenzise isikrufu esifakiwe ukuyifaka kalula
Isilinganiso Esikhulu Sokugeleza Kwamanzi Nekhwalithi ye-Neoperl ABS Aerator
Izinga lokugeleza kwamanzi okuphezulu lingagcwalisa izimbiza ezinkulu noma amapani ngokushesha, inqubo yokufakelwa kokuvuza ingavimbela ukuvuza okungadingekile uma ungasebenzisi.
Ukusebenza okuphezulu i-Neoperl ABS ingathuthukisa umphumela wokuhlanza, ikonga amanzi ngamaphesenti angama-50 kunesikebhe esijwayelekile, okwenza ukugeleza kube bushelelezi futhi ngobumnene, futhi kube nemisebenzi yokuhlunga nokulwa ne-splatter.
I-Premuim Made / Design Isixhumi Esijwayelekile sase-US Nento Eqinile Yethusi
Isixhumi se-1/2 "NPS kuye ku-1/2" se-NPT, indinganiso yase-US ekulula ukufakwa.
Ithuluzi eliqinile lokwakha lingomunye wezinto ezihlala isikhathi eside nezisetshenziswa kakhulu ekwakheni amapayipi. Kanye neminyaka eminingi yokusebenza okuhle kakhulu, mancane amathuba okuthi alule noma avuze. Yini engcono kakhulu ukuthi ukusetshenziswa kwamanzi kanzima, ama-faucets adinga ukunakekelwa okuncane.
Okusha sha ebhokisini kulungele ukuthunyelwa
1 x I-Pot Filler Faucet
1 x Isixhumi
1 x Isisekelo se-faucet
1 iqoqo le-Mounting Hardware
1 x Incwadi Yokufundisa Yokufaka
I-1 Pair of Gloves
I-SKU: 2311300B Categories: Ikhishi Faucets, Embizeni Filler Ikhishi ompompi Tags: Ibhodlela lokugcwalisa, Wall Mount
Amasentimitha angu-15.39 x 9.57 x 2.09